Kaviaar "Pyatiminutka" - resipe
Ny trondro mena dia iray amin'ireo vokatra tena ilaina indrindra noho ny votoatiny feno sata matavy feno omega-3 ary vitaminina goavana be. Na izany aza, misy matetika izany - lafo be. Amin'ity tranga ity dia mendrika ny mampiasa ny fomba fikarakarana voankazo mena "Pyatiminutki", izay efa fantatry ny olona izay nampifandray ny fiainany tamin'ny fanangonam-bokatra, salala, salady mavokely ary trondro hafa amin'ity sokajy ity. Na dia tsy mitahiry ela be aza izy io, dia mbola hitoetra ao an-tsainao mandritra ny fotoana maharitra ny tsiron'ny ranomasina, ary hanamafy orina ny fahasalamana.
Ahoana ny fomba hanamboarana "Pyatiminutka" caviar avy amin'ny salmon mangatsiaka?
Mba hamerenana izany karazan-tsakafo ho an'ny "Pyatiminutki" kavia izany, dia mila fotoana kely, zava-manahirana ary zavatra kely kely ianao.
rano madio voasivana - 2.5 litatra;
potato - 1 pc .;
zezika yatykan'ny salmon chum - 10 pcs .;
sira - 500 g.
Makà 3-4 yasysk ary apetraho eo amin'ny lavaka misy toerana avo. Atsofohy eo am-pandehanana ny fitaovana fisakafoanana ary apetraho amin'ny haavo faran'izay ambany ny fitaovana, ary apetraho ao anaty saosy izany. Amin'izany fotoana izany, ny yastikov dia ho mora tapaka eo amin'ny fefy eo amin'ny fihodirana, ary ny atody tsy hijanona raha tsy misaraka amin'izy ireo. Hamarino fa ny yastys rehetra dia vita ary manala ny mixer, ka manamarina fa ny atody madio ihany no mijanona ao anaty tahiry. Na dia tsy azonao an-tsaina akory aza ny fomba hanomezana atody ny atody "dimy-minitra" ao an-trano, ity fomba fitsaranao ity dia mora mora aminao. Tahaka izany koa, ny fizarana ny ampahany manaraka ny yasys.
Dia manamboara siramamy. Mba hanaovana izany, esory ny sira ao anaty rano ary atsipazo eo ambonin'io ilay ovy potipo. Raha mitohy miparitaka eny ambony izy dia mampiseho ny fisian'ny siramamy. Aolory izy ary afahao. Raha misy tavimamy tavela eo amin'ny farany ambany, dia arotsaho amim-pitandremana tsara ny sira madio ao anaty vata hafa ary ampiasao izany. Apetraho ao anaty sira ny atody ary avelao dimy minitra izy ireo. Apetraho eo anelanelan'ny gidro ny kaviara ary afatory ny kibay ary asio azy amin'ny alina. Amin'ny maraina, dia mety hiparitaka ny kitapo misy kitapo ety ary hisakafo mandritra ny andro maromaro.
Ahoana ny fomba hanamboarana "Pyatiminutka" kavia avy amin'ny salady mavokely?
Ao amin'ny firenentsika dia trondro mihoatra noho ny malaza io trondro io, fa lafo ihany ny kavia. Mba hahatakarana ny fomba hanamboarana "Pyatiminutku" caviar, dia azo atao mihitsy aza na dia ho an'ny mpanjifany voalohany aza, ka sahy maka azy io.
ronono salady mavokely - 600 g;
sira - 6 tbsp. sotro kely miaraka amin'ny ambony.
Sokafy tsara ny kibon'ilay salady mavokely ary ento atody ny atody, ary tsy manimba azy ireny. Ataovy azo antoka fa voavoly tanteraka ny kavia, ary apetraho eo amin'ny solaitrabe izany. Raiso ny antsy sy ny lamosiny (matevina), manindry ny atody, manomboka amin'ny sisiny, mba hanadiovana azy ireo avy amin'ny akorany.
Mofomamy ny sira: manadio ny rano ary manafana avy hatrany ny sira ao anatiny. Ataovy azo antoka fa efa vonona ny sira amin'ny fametrahana atody atody: tsy maintsy miparitaka avy any ambony izy. Rehefa nitsangatsangana ilay sira, dia asio caviar eo aminy ary avelao 4-5 minitra eo ho eo. Aorian'izay, arotsaho ny sira miaraka aminà fantsakan-dalao, manangom-banana amin'ny sotro iray. Ankehitriny dia fantatrao ny fomba tsotra sy tsotra tsotra amin'ny sira "kiraro" Pyatiminutka.
Soso-kevitra tsotra amin'ny salady miaraka amin'ny atody
Adyghe cheese - mahandro sakafo mahandro ao an-trano
Sinoa mamy sy maingoka
Rassolnik miaraka amin'ny vary - recipe
Sakafo feno pizza
Manoty tongotra miaraka amin'ny ovy ao anaty lafaoro
Pike perch in the oven in foil - mahasalama mahasalama ireo sakafo matsiro
Salady avy amin'ny heriny
Ny Tranombokim-pirenen'i Israely
Takela-by ho an'ny lalantsara
Sakafo misy oliva
Wedding akanjo Pronovias
Oviana aho no afaka mampihatra aorian'ny fiterahana?
Toaka eo amin'ny vatana - soritr'aretina
Inona ny dingan'ny Pentoxifylline mandritra ny fitondrana vohoka?
Ahoana no hijerena tanora kokoa?
Sakafo avy amin'ny ovy
Salma salcomerila avy amin'ny ketrona
Manto of faux fur
Famokarana labozia avy amin'ny hazo amin'ny tanany manokana